Mitsoka ve ny marketing an'i Apple? | Martech Zone
Alakamisy, May 28, 2009 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Iza ny marketing no mandresy eto, Apple sa Microsoft? Click amin'ny alalanao raha tsy hitanao ilay horonantsary.
Ity lahatsoratra ity dia aingam-panahy avy amin'ny resaka nifanaovako Microsoft dia mahazo valiny mifanohitra amin'i Apple. Nitohy tao amin'ny Twitter ny resadresaka tamina bitsika tsara avy tamin'i Kara:
From karaweber: nankafy ny lahatsoratra androany i @douglaskarr. Nivoaka i Snarky, & ny famoahana ny «Mac aho» dia manomboka mivaky toy ny snarky. (FTR, mpankafy Apple koa aho).
Manantena aho fa hiteraka adihevitra lehibe izany. Apple dia raisina ho iray amin'ireo ekipa marketing tsara indrindra amin'ny Teknolojia ankehitriny, saingy manomboka manana eritreritra faharoa momba ny ezak'izy ireo aho. Nanana andraikitra lehibe tamin'ny fahombiazan'ny Apple ve ny marketing? Sa fidiram-bola tsotra izao? Azafady, aza afangaro ny vokatra amin'ny varotra amin'ity - tsapako fa ny iPhone dia mpanakalo lalao ao amin'ny indostria. Ny fanontaniako dia hoe sao dia manana vokatra tsara i Apple na tsia, ny fiantraikan'ny marketing amin'ny fitomboan'ny varotra an'i Apple?
Tena ny marketing an'i Apple ve no nahatonga ny fahasamihafana?
Rehefa henjana ny fotoana ka mihena ny fidiram-bola azo dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra sarotra kokoa ny mpanjifa sy ny orinasa. Satria i Microsoft dia mahazo ny anjarany amin'ny tsena avy amin'ny Apple amin'ny entana toy ny solosaina finday, dia toa nandresy ny Microsoft ady sarobidy. Izany hoe, ny marketing an'i Apple amin'ny endrika mahafinaritra sy kanto, fanamorana ny fampiasana, ary ny olana kely kokoa… dia tsy mandeha.
Midika izany fa ny mpanjifa manan-tsaina dia tsy mino fa ny vidin'ny Apple dia mendrika izany intsony. Tsy i Apple no manao an'io raharaha io… ary tsy mino aho (na koa Kara) fa dokam-barotra mahatsikaiky no manampy azy ireo. Raha ny tena izy dia heveriko fa mety ho toa ny ankizy manimba sasany fotsiny izy ireo izay mirehareha amin'ny kilalao vaovao indrindra ary manome ny rantsan-tànana ho an'ny orinasa (izaho sy ianao).
Mety fotoana izao hamonoana ny fampielezan-kevitra Mac vs. PC manontolo.
Singa iray lehibe amin'ny marketing lehibe dia fotoana nilany azy. Zava-dehibe ny hitoeran'ny varotrao eo amin'ny mpihaino anao… ary ny fanovana eo amin'ny toekarena dia misy fiatraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny olona. Vokatr'izany dia lakilen'ny fanovana mifanaraka amin'izany. Tonga izao ny fotoana tokony hanarahan'i Apple.
Tags: paomamarketing amin'ny paoma
Fikojakojana ny lisitry ny marketing amin'ny mailaka
May 28, 2009 amin'ny 9: 38 AM
Heveriko fa ny andalana farany nataonao dia manazava ny antony mahatonga ny Apple tsy hahazaka ny tsena. Niova tanteraka ny fomba fisainan'ny mpanjifa tao anatin'ny herintaona lasa izay ary mbola tsy nanova ny paikadim-barotra i Apple. Microsoft dia manana, ny dokambarotra finday latsaky ny $ 1500 dia tonga hatrany am-pon'ny mpanjifa mahatsiaro ho lafo.
May 28, 2009 amin'ny 11: 55 AM
Tsara apetraka! Ny dokambarotra Apple dia mahatsikaiky tanteraka. Tsy mbola tia azy ireo mihitsy aho ary tsy afaka mametraka ny rantsan-tanako amin'ny antony, ary io no snark azo antoka.
May 28, 2009 ao amin'ny 12: 16 PM
Heveriko fa izy ireo, ary efa nandritra ny fotoana elaela, marketing amin'ny sehatra fahalalana iray. Ho an'ireo olona tena tsy te-hieritreritra mihintsy amin'ny masinin'izy ireo (azo antoka fa tsy izaho), mandaitra ny marketing-dry zareo satria manandrana mampiseho ny maha-tsotra azy ireo izy ireo. Tsy manao na inona na inona ho ahy ny dokam-barotra ataon'izy ireo mampiroborobo ny “Genius”, tena tsy te ary tsy afaka mankany amin'ny magazay be olona aho mandritra ny ora fiasana ara-dalàna, saingy azoko atao ny mikaroka an-tserasera hahazoana fanampiana amin'ny anjaran'ny PC 90% + an'ny PC mpampiasa. Ny doka "Elimination" ataon'izy ireo dia manandrana milaza amiko fa safidy iray ihany no tsara, nefa rehefa nividy ny solosainako farany finday aho, dia nafindra ny Mac satria tsy nanana ny endri-javatra mety ilaiko izy ireo, saingy nahita PC mety. izay no tadiaviko rehetra.
May 28, 2009 ao amin'ny 2: 02 PM
Izaho dia mpankafy ireo jabs an-tsokosoko natao tamin'ny andiany voalohany nataon'i Mac nanampy. Saingy nieritreritra aho fa tsy nandray anjara firy loatra izy ireo tamin'ny 9 volana lasa izay, momba ny fotoana nanombohan'ny "bashing Vista". Nanomboka teo dia nihena hatrany ny hevitro momba ny doka nataon'izy ireo.
Amiko, ny doka vao haingana dia manao asa tsara kokoa amin'ny fanaovana ireo mpampiasa Mac efa misy azy ireo hahatsapa ho ambony noho ny safidiny noho izy ireo hitondra mpampiasa vaovao ao anaty vala. Asehoy moramora (sy mahatsikaiky) ny tombotsoan'ny vokatrao ary hanatona anao ny olona. Manompa ny fifaninanana, ary ankolaka ireo mampiasa azy, ary mety hihatakataka ianao sy ny fandavana mafy loha handinika fiovana aza.
Tsy azoko antoka hoe ahoana ny fahombiazan'ny dokambarotra Microsoft Laptop Hunter amin'ny ankapobeny, saingy mampiseho farafaharatsiny ny vidiny sy ny karazany isan-karazany amin'ireo solosaina miorina amin'ny Windows. Izaho manokana dia mila $ 2,800 17 ″ MacBook Pro, saingy nividy netbook miorina amin'ny Windows 325 $ aho. Ny netbook dia mifanohitra tanteraka amin'ny MacBook Pro, fa ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny dia nahatonga ahy handinika indray izay tena ilaina vs izay mety ho tena mahafinaritra.
Apple dia hanana mpanaraka mahatoky amin'ny teknolojia hatrany, ary ho fanampin'izany dia hisy ireo izay te-handoa bebe kokoa amin'ny fampiasana bebe kokoa. Saingy ny toekarena ankehitriny dia manery ny olona maro kokoa handray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny vidiny mialoha fotsiny ihany, ary izany dia tsy sehatry ny tsena izay toa Apple hifaninana. Ary ny doka ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao dia tsy manatsara velively io toe-javatra io, na ho tsara na ho ratsy.
May 28, 2009 ao amin'ny 7: 40 PM
Fotoana kely taty aoriana dia reko i Merlin Mann nilaza fa raha mividy Apple dia tsy mendrika ny vola dia tsy mendrika ny vola – izay inoako.
Fampahalalana: mampiasa Mac any am-piasana aho ary milina Windows ao an-trano.
May 28, 2009 ao amin'ny 11: 45 PM
Mieritreritra aho fa manafangaro anao -barotra ary dokam-barotra.
Ny marketing an'i Apple hatramin'ny niverenan'ny asa dia tsy azo lavina fa ny dokam-barotra sy ny fampielezan-kevitra sasany kosa dia tsy nahomby indraindray.
Mino aho fa diso ny adihevitra fa ny fahombiazana lehibe nataon'i Apple tato ho ato. Ny vato fehizoro ny paikadin'i Apple dia ny fanaovana vokatra tsara foana fa tsy ny marketing.
Fahombiazana lehibe ny iPod fa tsy noho ny dokambarotra silhouette mandihy, fa satria / dia vokatra miavaka izay / mihoatra lavitra noho ny zavatra hafa rehetra eny an-tsena.
Na manao ahoana na manao ahoana toe-karena toe-karena, dia handoa ny vokatra lehibe hatrany ny mpanjifa. Apple dia niorina tamin'ny fitotonganana ary mbola miroborobo amin'ity fitotonganana ity.
Mety ho somary aloha loatra ny fanambarana fa mahazo tombony amin'ny Apple ny Apple. The tatitra izay hitako toa nitaky ny mifanohitra amin'izay.
May 29, 2009 amin'ny 12: 31 AM
Na dia miresaka ny doka aza aho dia mbola manontany ny marketing ihany fa tsy ny dokam-barotra. Tsy mampametra-panontaniana ireo vokatra mahavariana koa aho. Mamaly ity fanehoan-kevitra ity amin'ny alàlan'ny Ipod aho ary ny solosaina finday safidiko dia ny MacBookPro ahy. Ny fanontaniako dia hoe ohatrinona ny lanjan'ny lanjan'i Apple amin'ny fahombiazany? Harena tsotra ve no nilalao ny andraikitra?
May 29, 2009 amin'ny 8: 51 AM
Tiako ity dinika ity. Misaotra anao nanangana azy. Raha ny fahitako azy dia manana ary hanana marketing marketing mamiratra i Apple. Ny orinasa dia naharitra tamin'ny fikorontanana maro, ny ampahany betsaka noho ny fahaizany mivarotra sy ny fahafahany manitsy amina dime. Ny fampielezana doka ankehitriny dia singa iray monja amin'ny paikady, izay heveriko fa ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra dia mifantoka be loatra. Heveriko fa ny firesahana ny doka eo am-panombohana dia mametraka an'io olona io. Na eo aza izany, ny paikadin'i Apple amin'ny marketing dia tsy misy afa-tsy dokam-barotra taktika fotsiny. Ny fandrindrana ny vokatra, ny vidiny, ny fametrahana azy, ny famolavolana ary ny fotoana ampiharina amin'ny alàlan'ny dokambarotra kendrena, pr, hetsika ary paikady varotra mivantana sy ankolaka hafa dia hitazona ity orinasa ity ho lohalaharana amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny varotra mandritra ny fotoana maharitra.
3 Jun 2009 amin'ny 3:56 AM
Salama Douglas, azafady namela fanehoan-kevitra ivelan'ny lohahevitra, saingy toa ny rohy voalohany, izay nilaza fa tsindrio raha hijery horonan-tsary, dia mampifandray amin'ny horonan-tsary iray mankany amin'ny pejy 404, “Tsy hitanay izany! Na very ianao na isika! ”. Averina… ny fialantsiny azafady noho ilay fanehoan-kevitra ivelan'ny lohahevitra.